Soomaali Alifbeet - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Alifbeet Soomaali Laatiin)
Soomaali Alifbeet (Af Ingiriis : Somali alphabet; Af carabi: الأبجدية الصومالية) waa nidaam xarfo loo habeeyay si kala horeeysa taasi oo loo isticmaalo in lagu qoro Luuqada Soomaaliga. Alifbeetku waa aasaaska dhammaan wax qorista farta. Tusaale ahaan, Af Soomaaligu wuxuu leeyahay dhowr nooc oo Far Soomaali ah, laakiin waxaa si sharci ah loo isticmaala qaabka laatiiniga oo dowlada Soomaaliya sharciyeysay horaantii sanadihii 1970kii.
Farta Soomaali Laatiinka waxaa fikradeeda lahaa oo habeeyay aqoonyahan Shire Jaamac Axmed (Af carabi: شيري جامع أحمد) kaasi oo kaashanayay gudi ay Dowladii Soomaaliya ku dartay. Shire wuxuu ahaa luuqadyahankii Soomaaliyeed ee allifay Far Soomaaliga aan maanta u naqaan B,T,J ee la hirgalayay sanadkii 1972.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Soomaali_Alifbeet&oldid=204668"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Agoosto 2020, marka ee eheed 06:15.